Loolanka Maalgeshi ee dekadaha Soomaaliya oo cirka isku shareeray, Maxaa cusub? – Hornafrik Media Network
Hornafrik-Loolan aad u adag ayaa ay dowlado bdan ugu jiraan in ay maalgeshtaan dekadaha Soomaaliya.
Waa rajo dhalatay kadib markii ay ku braraugeen in Soomaali thay meel muhiim u ah ganacsiga dekadaha , is bdedl dhanka amniga ahna uu snadahaan danbe u muuqdo mid ka wanaagsan marka loo bar bar dhigo sanado badan kahor.
Waxaa jira dowlado la tilmamayo in ay qorsheynayaan sidii ay dowladda Soomaliya ugala hadli lahaayeen maalgeshiga iyo horumarinta dkada dalak.
Hase ahaatee ka sukow kuwaasi , waxaa jira dowlado hoey ugu shaqeeyay iyo kuwo hatan ku soo biiraya lolanka.
Imaaraatka iyo Turky-ga ayaa horey waxaa ay ka howlagleen ilaa hatana ka shaqeynayaan dekadaha aar ee dalka ku yaala ,
Itoobiya ayaa dhawaan Somaaliya la gaartay is afragad ku saabsan in ay wax ka maalgeshato afar dekadood oo Soomaaliya ku yaala.
Maanta ayaa wafdi ka socda dowladda Qatar soo gaareennmagaalada Muqdisho , wafdiga ujeedkiisa ugu weyn aya ah in ay heshiisho maalgshi dekaded la saxiixdaan Soomaaliya. waxaana ay kulan la qaateen ra’iislaw asaraa xukuumada Soomaaliya Xasan cali Kheyre. Sidaasi waxaa lagu qoray wakaladad wararka Soomaaliyeed ee SONNA.
Masuuliyiinta ka socta dowladda Qatar waxaa wehliya sida wararku shegayaan , madaxda shirkad maal geshi oo dalkaasi laga leeyahay.
Tani aya yb kam ah loolanka sii ordhaya ee dowlado badan ugu jiraan maalgeshiga dekada Soomaaliya , waxaase laga dhiwr sugayaa sida looga faa;ideysan doono baahiyahah maalgesgi ee jira iyo loolanka badan ee loogu jiro.
Faah Faahin Shabaab iyo Shacab dagaal culus dhex maray!